Shiinaha Gawaarida Gawaarida Muuqaalka Muraayadda PK9780 Soo-saare iyo Badeecad | Buundada Galbeed
Ku soo dhowow dukaankeenna internetka!
Muraayada dhinaceeda gawaarida PK9470
Muraayadda dhinaca loogu talagalay Gawaarida PK9583
Gawaarida Gawaarida Gawaarida PK9780
Muraayadda Side Truck PK9883
Muraayadda Truck Side PK9849
Muraayadda Truck Side PK9823
Muraayadda Truck Side PK9822
Muraayadda Truck Side PK9810
Muraayadda Side Truck PK9592
Muraayadda Truck Side PK9590
PK9780 wuxuu ku habboon yahay ISUZU NKP NHR taxane ah. Wax soo saarka aan sameyno waa kuwo qiimo jaban oo tayo leh. Sidoo kale waxaan jeclaan lahayn inaan kasbano kalsoonidaada inagoo amarkaaga sida ugu habboon kuugu soo gudbinayna. shirkadeena ayaa u heellan sidii ay uheli laheyd adeega macaamiisha ugufiican waxsoosaarkana waa lagaa heli karaa.
* Sharaxaadda alaabta
PK9780 wuxuu ku habboon yahay ISUZU NKP NHR taxane ah. Wax soo saarka aan sameyno waa kuwo qiimo jaban oo tayo leh. Sidoo kale waxaan jeclaan lahayn inaan kasbano kalsoonidaada inagoo amarkaaga sida ugu habboon kuugu soo gudbinayna. Shirkaddayadu waxay u heellan tahay inay haysato adeegga macaamiisha ugu fiican iyo alaabooyinka aad adigu heli karto. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan sidoo kale samaysannaa dhaqankeenna ganacsi, shirkadda waxaa lagu wadaa meel cad oo qiimo leh iyo aragti ganacsi.Waxaan kaa rajeyneynaa dareenkaaga wanaagsan iyo muddada dheer Waxaan ka dhignaa dhammaan badeecadaha kuwo fiican oo waara macaamiisheenna. in ka badan 10 sano oo horumar ah, waxaan noqonay shirkad hormuud u ah waxsoosaarka iyo jumladleyda gawaarida oo dhan iyo qeybaha dayactirka ee SINOTRUK HOWO, STEYR, STEYR KING, GOLDEN PRINCE iwm. mabda 'ahaan, macaamiil badan ayaa noqda macaamiishayada daacadda ah jiilalka. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku soo biirto qoyskeena.
PK MAYA PK9780
CODSIGA ISUZU NKP NHR taxane ah
Tixraac OEM 894262542
* Maxaad Noo Dooratay
* Adiga oo noo maraya, waxaad ka heli kartaa dhamaan qalabka dayactirka ee gawaarida aad u baahan tahay
* Waxaan ku rarnaa dhammaan amarrada waqtiga saxda ah.
* Waxaan ka dhoofinaa qeybaheena adduunka oo dhan.
* Dhammaan amarrada waxaa lagu buuxiyaa si nadiif ah oo taxaddar leh
* Qaybaha Tayada oo leh Adeeg Xirfad leh Qiimaha Tartan
* Khabiir SWB oo ku xeel dheer qaybta Truck & Bus oo tayo salka ku haya.
* Waxaan kaaga jawaabi doonaa baaritaankaaga 24 saacadood.
* Waxaan u ixtiraameynaa macmiil walba sida saaxiibkeen oo waxaan si daacad ah u ganacsi iyo saaxiibo la sameysaneynaa, meel kastoo ay ka yimaadaan
* Tayada marka hore, sumcadda sare, adeegga ugu tayada fiican iyo, macaamiisha ku qanacsan
Hadafkeena koowaad waa inaan qancino dalabyada macaamiisha isla markaana aan siino alaab tayo sare leh qiimaha ugu tartamaya.
Taasna wax soo saarkeennu had iyo jeer waa loo horumariyey iyadoo loo eegayo heerka caalamiga ah ee ixtiraamaya heerka tayada laakiin sidoo kale lagu hagaajinayo saadka iyo silsiladda saadka.
Kadib dirista, waxaan kugula socon doonnaa alaabtii labadii maalmoodba mar, illaa aad kahesho alaabada. Markii aad alaabtii heshay, tijaabi, oo jawaab celin isii. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid dhibaatada, nala soo xiriir, waxaan kuu soo bandhigi doonnaa habka xalka adiga.
* Baako iyo Gadiid
Baakadeena ugu xirfadeysan. Ahaan, bacda xumbo marka hore, xirmo kartoon ah. waxaan ku xirnaa alaabteena sanaadiiq cadaan dhexdhexaad ah iyo kartoono bunni ah. Haddii aad sharci ahaan u diiwaangashan tahay, waxaan ku rakibeynaa alaabta sanduuqyadaada sumadda leh ka dib markaan helno waraaqahaaga oggolaanshaha.
Gaadiid waaweyn oo xamuul ah oo la geeyo dekedda
Iskaashiga gaadiidka caalamiga
Warqad diris ahaan, sida DHL 、 UPS 、 FEDEX iwm. Waa albaab ilaa albaab, badiyaa 3-7 maalmood oo shaqo ayaa imanaya.
Hawada ilaa dekedda hawada, badiyaa 7-12 maalmood oo shaqo la yimaado.
Dhinaca badda ilaa dekedda, badiyaa waa 25-40 maalmood oo shaqo la yimaado.
Hore: Muraayadda dhinaca loogu talagalay Gawaarida PK9583
Xiga: Muraayadda Truck Side PK9440
Muraayadda Truck Side PK9512
Isku qor wargeyskeena si aad ula socoto dallacsiintayada, qiima dhimista, iibka, iyo dalabyada gaarka ah
Ku dar: 10F, Wanjia Plaza, Jingao Rd 377, Shanghai, PRC